Taphataan kubbaa miilaa cimaa Afrikaa kan BBC isa kan 2017 akkamin filatama? - BBC News Afaan Oromoo
Taphataan kubbaa miilaa cimaa Afrikaa kan BBC isa kan 2017 akkamin filatama?
10 Sadaasa 2017
Taphattoonni kubbaa miilaa taphataa cimaa Afrikaa BBC kan bara 2017 sagantaa addaa BBC tajaajila addunyaa, BBC Oduu Addunyaa, BBC Onlaayinii akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti ibsama.
Sagantaan kuni Sambata Sadaasa bultii 2 bara 2010 (Sadaasa bultii 11, 2017) galgala 3:05 - 4:00'tti tamsa'a.
Fuulli filannoo itti tasaifamu sa'aatii 3:50 irratti ummataaf ifa ta'a.
Ulaagaa fi akkaataan filuu dandeessan akka asiin gadiitti ibsameera.
Waa'ee filannoo gadi fageenyaan baruuf ulaagaa asiin gadi ilaalaa.
Adeemsa taphattoonni kaadhimaman
Ekispartoonni kubbaa miilaa ciccimoo Afrikaa fi biyyoota garaagaraa argaman taphattoota dhiiraa shan ciccimoodha jedhan akka badhaasaas akka kaadhiman gaafatamiiru. Tokko hanga shaniis akka kaa'an (kan sadarkaa jalqabaa filatame qabxii shan qaba) jechuudha.
Ulaagaa asii gadii barraa'en akka taphattoota badhaasaaf kaadhiman gaafataman:
Dandeetti guddaa Ispoortii (ga'umsa dhuunfaa, cimina teeknikaa, hojii garee, bu'aa qabxii irratti gahee qaban, waancaalee, naamusa taphaa kan eegu, bara 2017 cimina waaraa kan agarsiisan, ga'umsa fooyyeessaa kan jiran )
Dhiibbaa naannoo (gumaacha taphataan suni kubbaa miilaaf taasise akkasumas ispoortii naannoo inni jiru irratti ykn dirreen ala taasise)
Faayidaa idil-addunyaa (faayidaa tapha idil-addununyaafi misooma isaaf taasise )
Ekispartoonni ispoortii yeroo Fulbaana bara 2017 hanga ammaatti jiru akka hubannoo keessa galchan gaafatamaniiru.
Taphattoonni kaadhimaman sagantaa addaa Sambata Sadaasa 02, 2010 (Sadaasa bultii 11, 2017) sa'aatii 3:00 - 4:00 BBC tajaajila addunyaa fi BBC Televijinii addunyaa taasifamu irratti ifa ta'u. Fuula websaayitii (marsariitii) kubbaa miilaa Afrikaa BBC Ispoortii irrattis mul'ata.
Sagantaa kaadhimaa filachuun yeroo rakkisaa ta'etti gareen qopheessitoota taphataa cimaa Afrikaa kaadhimamtoota gara jahatti guddisuu danda'u.
Eenyutu badhaasa kanaaf dorgomuu danda'a?
Taphattoonni garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Afrikaaf taphatan badhaasa taphataa cimaa Afrikaa kan BBC badhaafamuu danda'u.
Takkaa maqaan taphattoota kaadhimaman maxxanfame booda, baadhaasichi sagalee ummataa kallattiin intarneetaan kennamun murtaa'a.
Sambata Sadaasa 02, 2010 (Sadaasa bultii 11, 2017) galgala sa'aatii 3:50 eegale hanga Sadaasa bultii 20, 2010 (Sadaasa 27, 2017) sa'aatii 3:00'tti filachuun danda'ama.
Bu'aan filannoo walii galaa Muddee 02, 2010 (Muddee 11 bara 2017) galgala sa'aatii 2:35'tti sagantaa kallattiin televijinii 'Focus on Africa' fi raadiyoo irratti ibsamuun beekama. Fuula marsariitii BBC Ispoortii kubbaa miilaa Afrikaa jalattillee argama.
Sagantaa sana irrattii dorgommiin jira, badhaasnis kennama.
Akkamin onlaayinii filuun danda'ama
Fuula marsariitii kubbaa miilaa Afrikaa BBC Ispoortiirratti dhaqxani qajeelfama jiru hubachuun filuu dandeessu. Sagaleen onlaayinii kompitara tokkon takkuma kennama.
Sagalee ummataa - dambii fi yaada waliigalame
1. Sagaleen kuni BBC'dhaan to'atama. Badhaasichi seera ittin bulmaata BBC'n dorgommiilee fi adeemsa sagalee kennuu irratti qabu guutuu qabu.
2. Abbaan mo'ate waancaa faayame fi maqaa ''Taphataa kubbaa miilaa cimaa Afrikaa kan BBC isa bara 2017'' fudhata.
3. Taphattoonni badhaasa taphataa Afrikaa cimaa waggaa kanaa paanelii ekispartoota kubbaa miilaa Afrikaatin dura akka kaadhimaman ta'a.
4. Ulaagaan taphattoonni baadhasichaaf kaadhimaman akka asiin gadiiti: ga'umsa dhuunfaa, cimina teknikaa, hojii garee, bu'aa irratti gahee ofii qabaachuu, waancaawwan, naamusa taphaa, gumaacha taphataan suni kubbaa miilaa fi ispoortiif akkasumas naannoo isaafi dirreen ala taasise. Dabalataanis, faayidaa tapha idil-addunyaafi misooma isaaf bara 2017 gumaache keessatti argamu.
5. Taphattoonni badhaasaaf kaadhimaman marsariitii BBC Ispoortii kubbaa miilaa Afrikaa jalatti ifa ta'u.
6. BBC'n daataa dhuunfaa keessan imaammata mateenyaa, kuusaa yaadannoo fi haala itti fayyadama bu'uura godhachuun ittin dhimma baha. Fakkeenyaaf, sagalee kennamuuf ykn immoo dogongorri yoo uumame qorachuuf daataa dhuunfaa keessan fayyadamna.
7. Guyyaan filannoo Sadaasa 20, 2010 (A.L.A Sadaasa 27 bara 2017) galgala sa'aatii 3:00 irratti raawwata.
8. Murteen filannoo kan xumuraa fi yaadnis ta'e ergaan filannoo kennuu waliin ergamu hin jiraatu.
9. Badhaasichi akkuma jedhame kan kennamu yoo ta'u turuu hin danda'u. Qarshiin akka filmaataatti kennamu hin jiraatu. Sagalee kennuuf badhaasni kennamus hin jiru.
10. BBC'nis ta'e qaamonni kaan, eejansiwwanis ta'u danda'u, waliigalteen isa jala hojjetan kaan dogongora teeknikaa, kan intarneetii, rakkoo onlaayiniin mudatu, sarvarii ykn kaaniin sagaleen kenname yoo bade ykn sirriitti yoo galmaa'u dhabe itti gaafatamummaa hin fudhatan.
11. Sagaleen kenname waldhaheera (hatameera) jedhe yoo yaade ykn akkaataan sagalee kenname dogongoraan raawwateera jedhe BBC'n sababa sirrii qabaate, sagalee kenname hambisuuf ykn dhorkuu danda'a. BBC'n adeemsa filannoo filmaata biraa kennuun bakka buusuuf mirga guutuu qaba. Sagaleen bbc.co.uk irratti yeroo kennamu wanti sirrii hin taane yoo mudate BBC'n teessoo 'IP kompitara keessan' ykn 'cookies' marsariitii fayyadamuu danda'a. BBC'n haala itti-fayyadama dhaabbatichaan yoo dirqama seene malee odeeffannoowwan kana maxxansuufis ta'e kaaniif eeyyama malee dabarse hin kennu.
12. Namoonni sagalee kennuu keessa hirmaatan seera kana kabajuu fi jala bulanitti yaadama. Hojjetaan BBC yookiin badhaasa sagantaa kana qopheessuu keessa jiru kamuu sagalee kennuu hin danda'u.
13. Sagalee kennamu hunda BBC Afrikaatu olaantummaan to'ata.
14. Taphattoota kadhimamaniin itti fufuu ykn badhaasni kun yoo maqaa BBC balaarra buusa ta'e BBC'n of-eeggannoo guddaan taphattoota kadhimaman keessaa baasuufis ta'e badhaasicha tursuuf mirga guutuu qaba.
15. Filannoon kuni fi qajeelfamni kuni akka seera Ingilaandiifi Weelsiitti raawwata.
Itoophiyaan namni jalqabaa koronaavaayirasiin du'uu beeksifte
Baqataan Sudaan Firaansitti nama lama waraanee ajjeesuun shakkame hidhame
Teeknoolojiin bilbilaa 5G dhuguma koronaavaayirasii tamsaasaa?
Narsii Oromoo Ameerikaatti dhibamtoota COVID19 yaalaa jirtu
'Tatamsa'ina Covid-19 ittisuuf guutummaatti sochii dhorkuu hin dandeenyu'
Itoophiyatti namoonni dabalataa sadii koronaavaayirasiin qabaman
Finfinneetti poolisiin uffata danbiifi meeshaalee waraanaa magaazinatti kuufame to'achuu beeksise
Weerara koronaavaayirasiifi yaaddoo Iccitii dhuunfaa
Gootota ja'an Afrikaa tibba koronaa eenyuu akka ta'an beektuu?